पत्याउनु हुन्छ? धेरै सस्तो भयो सुनको मुल्य आज फेरी बढ्यो, हेर्नुहोस तोलाको कति पुग्यो ? « गोर्खाली खबर डटकम
काठमाडौं । शुक्रबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आकासिएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार गत बिहीबारको तुलनामा शुक्रबार एकै दिन प्रतितोला एक हजार एक सय रुपैयाँले बढ्दै सुनको मूल्य ९१ हजार ७०० रुपैयाँ कामय भएको हो ।
जबकी गत बिहीबार बजारमा सुन प्रतितोला ९० हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला ९१ हजार २०० रुपैयाँ कामय भएको छ । महासंघका अनुसार यता चाँदीको मूल्य समेत शुक्रबार बढेको छ । गत बिहीबार प्रतितोला एक हजार ३१५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी शुक्रबार एकैदिन ३५ रुपैयाँले बढेर एक हजार ३५० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
यो पनि पढ्नु होस् :-जसको पार्टनर यस्ता हुन्छन् ती पति/पत्नी भाग्यमानी हुन्छन्
सामिप्यता खोज्ने : पति वा पत्नीमध्ये कसले, कसको बढी सामिप्यता खोज्छ ? यसले पनि उनीहरुको मनोभाव बुझ्न सकिन्छ । जसले आफ्नो पार्टनर नजिक हुँदा बढी आनन्दित महसुष गर्छ, जो आफ्नो पार्टनरसँग अनेक वहानाले नजिकिन खोज्छ । स्पर्श गर्न चाहन्छ । पक्कैपनि उनीहरुमा पार्टनरप्रति बढी माया हुन्छ । उनीहरु बिहे, भोजमा होस् वा घुमघाममा, सिनेमा हेर्न होस् वा पारिवारिक जमघटमा आफ्ना पार्टनरको उपस्थिती खोज्छन् । पार्टनरको अनुपस्थितीमा खल्लो अनुभव गर्छन् ।
केयरिङ : हाम्रो मुड सधै एकनास रहँदैन । कहिले खुसी र कहिले दुखी भइन्छ । यस्तो अवस्थाबारे ख्याल राख्ने पार्टनरमा माया हुन्छ । यदि पति/पत्नी दुखी हुँदा त्यसबारे चासो राख्छ र उनलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउने प्रयास गर्छ भने त्यस्ता पार्टनरमा माया हुन्छ । यस्ता पति/पत्नीले आफ्ना पार्टनरको स्वास्थ्य अवस्था के छ, दिनभर के खायो, के खाएन, औषधीको छुट्यो कि भन्नेसम्मका ख्याल राख्ने गर्छन् । त्यतीमात्र होइन, पार्टनरले लगाएको लुगा ठिक छ/छैन, गरेको काम सही छ/छैन भन्नेसम्ममा चासो राख्छन् । पार्टनरलाई जाडो भएको, भोकाएको, थाकेको सबै अवस्थाबारे बुझ्न खोज्ने पति/पत्नी मायालु हुन्छन् ।
खुसीको खोजी : पार्टनरको अनुहार सधै हँसिलो होस्, खसी होस् भन्ने चाह राख्ने पति/पत्नीलाई पनि सकारात्मक मान्नुपर्छ । यस्ता पति/पत्नी पार्टनरको खुसीमा आफ्नो खुसी खोज्छन् । पार्टनरको सुखमा आफु आनन्दाभूत गर्छन् । त्यतीमात्र होइन, पार्टनर के कुरामा खुसी हुन्छन्, के कुरामा रमाउँछन् त्यस्तै वातावरण बनाउने प्रयास गर्छन् ।
सकारात्मक भाव : कतिपय दम्पतीमा के हुन्छ भने, पति वा पत्नीले भनेको कुरालाई गलत व्याख्या गर्ने । गलत ढंगले बुझ्ने । यहि कारण उनीहरुमा मनमुटाव भइरहन्छ । यद्यपी पति/पत्नी जो आफ्नो पार्टनरप्रति सकारात्मक भाव राख्छन् । पार्टनरको भावनालाई सम्मान गर्छन् । पार्टनरले बोलेको, भनेको, सोचेको कुरालाई सकारात्मक रुपमा लिन्छन् । यस्ता पति/पत्नीले आफ्ना पार्टनरलाई माया गर्छ ।
सहयोगको भावना : अक्सर पति घरबाहिरको काम गर्ने, पत्नीले घरधन्दाको काम गर्ने पारिवारिक संरचना छ हामीकहाँ । घरधन्दाको काम गर्ने, बच्चा हेर्ने, खानपिन पकाउने जस्ता काम पत्नीको जिम्मामा लगाइन्छ । घर बाहिरको काममा पतिलाई अगाडि सारिन्छ । यस्तो अवस्थामा पति/पत्नीले आफ्नो पार्टनरको काम साझेदार गर्छन् भने उनमा अधिक माया हुन्छ ।
ह्वात्तै घट्यो सुनको भाउ, हेर्नुहोस् कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
“निषेधाज्ञाको बेला “चकित पार्ने गरि यति धेरैले ह्वात्तै घट्यो सुनको भाउ , तोलाको कतिमा झ’र्यो ?
“निषेधाज्ञाको बेला पहिलो” पटक यति धेरैले ह्वात्तै बढ्याे सुनको भाउ , तोलाको कतिमा झ’र्यो ?
हिजो ह्वात्तै घटेको सुनको मूल्यले आज देखायो चमत्कार: हेर्नुहोस् कति पुग्यो !
चालू आर्थिक वर्षकै सबैभन्दा कम भयो सुनको मूल्य तपाईलाई बिस्वास लाग्न नसक्ला : हेर्नुहोस् कति पुग्यो !